Bangkok-Mae Sout | Sea Rain Myanmar
ချစ်ခင်သော Sea Rain ဧည့်သည်တော်များအတွက် အစိုးရရုံးပိတ်ရက် နှင့် ကောျင်းပိတ်ရက်အတွင်းအားလုံးပျော်ရွှင်စွာဖြင့် ဒီဇင်ဘာလမှာ ဒီဇင်ဘာနှင်းတွေနဲ ့အတူ ပျော်ရွှင်စေရာမည့်ဖြစ်သော ဘန်ကောက်ရှိ မြဘုရား ၊ ရွှေတောင်ကုန်းဘုရား နှင့် ဘုရင့်နန်းတော်တိုု ့ဝင်ရောက်လေ့လာဖူးမြော်ကြမည်။ ဧည်သည်တော်များ မရောက်ဖူးတော့ နေရာများ နှင့် သဘာဝရူခင်းများကို ခံစားရင် ဘန်ကောက်မြို ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်နေရာများကိုလည်း ရောက်မယ့် ခရီးစဉ်ထွက်မည့်နေ့………
ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ - ဇန်နဝါရီလ ၁ - ၂၀၁၈ ( နှစ်သစ်ကူး )
ဘန်ကောက်အထူးသီးသန် ့ခရီးစဉ် ( ၂ ည / ၃ ရက် ) – 380 USD
ဘန်ကောက်- ပတ္တရား ခရီးစဉ် ( ၂ ည / ၃ ရက် ) – 380 USD️
ဘန်ကောက်-ကန်ချနာပူရီခရီးစဉ် ( ၂ ည / ၃ ရက် ) – 380 USD
ဘန်ကောက် - ဟွာဟင်း ခရီးစဉ် ( ၂ ည / ၃ ရက် ) – 380 USD
ခရီးစဉ်ကိုနောက်ဆုံးစာရင်းပိတ်မည်နေ ့- ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်ခရီးစဉ်အတွက် ဒီဇင်လာလ ၂၀ ရက်နေ ့ပိတ််မည်။
အကောင်းဆုံးကိုသာ ရရှိစေချင်တဲ့ Great Asia Dragon Travel & Tours ရဲ့ စေတနာတွေနဲ့ စီစဉ်ထားတဲ့ အထက်ပါ ခရီးစဉ်အတွက်
Airline ✈ Nok Air Airline ( Dec 30 - Jan 1 )
ကီလိုချိန် ၂၀ အပါ Bangkok မြို့လယ်ကျပြီး Platinam, Central World နားနီးတဲ့ ဟိုတယ် ၊ အစားအသောက်၊ ဝင်ကြေးလက်မှတ်များ၊ ကားခများ၊ မြန်မာစကားပြော Tour Leader…… အပြီးအစီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကုမ္ပဏီ၊ အသင်းအဖွဲ့များ၊ မိသားစုများ သီးသန့်သွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အထူးစီစဉ်ပေးနေပါတယ် ခင်ဗျာ။
2018 နှစ်သစ်မှစ၍ Siam Park City Bangkok - Water Park and Amusement Park ကစားကွင်းကို ပို ့ပေးမယ့်ခရီးစဉ်ကို ပြုလုပ်ပေးမည့်ဖြစ်ကြောင်း အာရှနဂါး ဧည့်သည်တော် များကို အသိပေးအပ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၊ အသင်းအဖွဲ့များ၊ မိသားစုများ သီးသန့်သွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အထူးစီစဉ်ပေးနေပါတယ် ခင်ဗျာ။ Sea Rain Travels & Tours ပြည်ပခရီးစဉ်ဌာန ဖုန်းနံပတ်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်နိုင်ပါတယ်။
Hotline: 09443008181
ချစ်ခင်သော Sea Rain ဧည့်သည်တော်များအတွက် ဒီဇင်ဘာလ အတွင်း ဘန်ကောက်ရှိ စျေးဝယ်ထွက်ချင်သူများအတွက် အဝတ်အထည် ( ကျား / မ ) ၊ အစားအသောက်များ နှင့် အခြား လူသုံးကုန်ပစ္စည်း များကို Discount 50 % - 80 % ဖြင့် ရောင်းပေးနေတဲ့ ကာလလည်းဖြစ်ပြန် ပြီးတော့ မြဘုရား ၊ ရွှေတောင်ကုန်းဘုရား နှင့် ဘုရင့်နန်းတော်တိုု ့ဝင်ရောက်လေ့လာဖူးမြော်ကြမည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ - ၂၅ ( ခရစ်စမတ်နေ ့) လူဦးရေ5ယောက်သာလိုပါသေးတယ် ။
ခရီးစဉ်လိုက်ချင်ရင် အမြန်ဆုံးစုံစမ်းစာရင်းပေးသွင်းရင် ကြားပါရန်
ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်ခရီးစဉ်အတွက် ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ ့ပိတ်မည်။
Day 1 မြဘုရား နှင့် ဘုရင့်နန်းတော် ၊ ရွှေတောင်ကုန်းဘုရား ဘန်ကောက်မြို ့တွင် နာမည်ကြီးသောနေရာ China Town ကို စျေးဝယ်ခြင်း။ Biayoke Sky Hotel ရ၆ ထပ် / ရ၈ ထပ် တွင် အထူးဘူဖေးဖြင့် ညစာဧည့်ခံကျွေးမွေးပါမည်။
Day2Safari World + Marine Park တွင် တိရိစ္ဆာန်ပေါင်းစုံကို ကြည့်ရူခြင်း ၊ မျောက်လက်ဝှေ ့ကစားပွဲ၊ လင်းပိုင်းပြပွဲ၊ ဖျံပြပွဲ၊ Country Boy စစ်တိုက်ပြပွဲ၊ ဆင်ပြပွဲ။အခြားပြပွဲပေါင်းမျိုးစုံ
Day3Dream World တွင် Snow Town နှင့် အခြားကစားနည်းပေါင်းစုံကို ကစားကြပါမည်။
Airline ✈ Nok Air Airline ( Dec 23 -25 ) ကီလိုချိန် ၂၀ အပါ
Bangkok မြို့လယ်ကျပြီး Platinam, Central World နားနီးတဲ့ ဟိုတယ် အစားအသောက်ဝင်ကြေးလက်မှတ်များ ကားခများ မြန်မာစကားပြော Tour Leader…… အပြီးအစီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
Sea Rain Travels & Tours
မြဝတီ - မဲဆောက်ခရီးစဉ်
အရမ်းကိုတန်တယ့်စျေးနှုန်း (၁)ဦးကို 100,000/-ကျပ် ဖြင့်
30.12.2017 New Year
5.1.2018 - 12.1.2018 - 19.1.2018 - 26.1.2018
2.2.2018 - 9.2.2018 - 10.2.2018 - 16.2.2018
1.3.2018 - 2.3.2018 - 9.3.2018 - 16.3.2018
23.3.2018 - 24.3.2018 - 30.3.2018
6.4.2018 - 12.4.2018 - 13.4.2018 - 14.4.2018
15.4.2018 - 20.4.2018 - 27.4.2018
မြဝတီ၊မဲဆောက်၊ဘားအံ ၂ညအိပ် ၃ရက် ခရီးစဉ်
Passport မလိုပဲ မှတ်ပုံတင်လေးရှိရုံနဲ့ - ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ နယ်စပ်မြို့လေးကို သွားရောက်လည်ပတ်ကြမယ်.....
မဲဆောက်မြို့က 3* Hotel မှာတည်းမယ်.....
မဲဆောက်မြို့ရဲ့နံမည်ကျော်ဖဝေါဘုရားနှင့် နတ်နန်း နဂါးဂူ ရွှေကျောင်း၊သံလိုက်တောင်၊ ရေပူစမ်းနှင့်ရေတံခွန်၊မြွေဘုရားနှင့်ထိုင်းဘုန်းကြီးကျောင်း စသည့်နေရာများအပြင် စျေးဝယ်ယူမယ့် ဧည့်သည်တော်များအတွက် Robinson Life style, Tesco lotus Extra နှင့် မဲဆောက်စျေးတို့ကို
ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။နံနက်စာ၊ နေ့လည်စာ, ညစာ ပါအပြီးအစီးပါ၀င်ပါတယ်..
အပြန်လမ်းမှာလည်း ဘားအံမြို့ပတ်ဝန်းကျင်က တန်ခိုးကြီးဘုရားများကိုလည်း ပိုဆောင်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်...ခရီးစဉ်တလျောက်မှာလည်း ဧည့်သည်တော်များကို ၀န်ဆောင်မှု့တွေပေးမယ့် Tour leader လည်းပါဦးမယ် ရေသန့်၊စနိုးတာဝါ၊ တကိုယ်ရည်သုံး သွားတိုက်ဆေး၊သွားတိုက်တံ၊
ဆပ်ပြာ၊မျက်နှာသုတ်ပုဝါ ကိုလည်းပေးဦးမှာဆိုတော့ ပြီးပြည့်စုံသော ခရီးစဉ်တစ်ခုပါ.....
Phone : 09 443008181
လာရောက်ဝယ်ယူဖို့ အဆင်မပြေသော ဧည့်သည်တော်များကတော့
phone လေးသာဆက်လိုက်ပါ အိမ်တိုင်ရာရောက် လက်မှတ်များကို
ပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီ (၀န်ဆောင်ခ လုံးဝလုံးဝ ပေးရန်မလိုပါ)
Mae Sot-Phop phra itinerary
စရိတ်ငြိမ်း ၁ သိန်းကျပ်
5.1.2018 -12.1.2018 -19.1.2018 -26.1.2018
23.2.2018 - 28.2.2018
မြဝတီ၊မဲဆောက်၊ဖုတ်ဖရ ဘားအံ ၂ညအိပ် ၃ရက် ခရီးစဉ်
Passport မလိုပဲ မှတ်ပုံတင်လေးရှိရုံနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ နယ်စပ်မြို့လေးကို သွားရောက်လည်ပတ်ကြမယ်..... မဲဆောက်မြို့က 3* Hotel မှာတည်းမယ်.....
နံနက်စာ၊ နေ့လည်စာ, ညစာ ပါအပြီးအစီးပါ၀င်ပါတယ်.. အပြန်လမ်းမှာလည်း ဘားအံမြို့ပတ်ဝန်းကျင်က တန်ခိုးကြီးဘုရားများကိုလည်း ပိုဆောင်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်... ခရီးစဉ်တလျောက်မှာလည်း ဧည့်သည်တော်များကို ၀န်ဆောင်မှု့တွေပေးမယ့် Tour leader လည်းပါဦးမယ်
ရေသန့်၊စနိုးတာဝါ၊ တကိုယ်ရည်သုံး သွားတိုက်ဆေး၊သွားတိုက်တံ၊ ဆပ်ပြာ၊မျက်နှာသုတ်ပုဝါ ကိုလည်းပေးဦးမှာဆိုတော့ ပြီးပြည့်စုံသော ခရီးစဉ်တစ်ခုပါ.....
Phone : 09443008181